မော်နီကာ PUROHIT - STARSUNFOLDED - အထွေထွေ
အခြားအမည်များ မော်နီကာရှားမားရူဟိုက်၊  iWGA - Monica Purohit ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
အလုပ်အကိုင် အထူးပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပညာရှင်
ကျော်ကြားသည် အိန္ဒိယရှိနားမကြားသူများနှင့်ချို့ယွင်းသူများအတွက်အလုပ်လုပ်သော 'Anand Service Society' အမည်ရှိအဖွဲ့အစည်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ခြင်း။
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ • Rotary International District 3040 - ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ဆရာထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း
•အမတ် Shri Shivraj Singh Chouhan နှင့်အိန္ဒိယသံမဏိအတွင်းရေးမှူး Mrs Aruna Sharma မှ CM FICCI မှအမျိုးသမီးများအောင်မြင်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
• 2017 ခုနှစ်တွင်နားမကြားသူများနှင့်စကားပြောဆိုမှုချို့ယွင်းသောကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုအတွက် Rotary Nation Builder Award
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာနမှအိန္ဒိယအမျိုးသမီး ၁၀၀ အနက်မှတစ်ယောက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နားမကြားသောကလေးသူငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအတွက် Zee Women Achiever Award
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နားမကြားသောကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် Swaraj အမျိုးသမီးထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း
2016 ခုနှစ်တွင် Gurjar Goud 1st Ratna Samman
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နားမကြားသောကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအတွက် Rotary Club Award
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Jindal Steel Foundation မှ Rashtriya Swayam Siddh Samman ဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်
•နားမကြားသောကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် Innerwheel Club Award 2015 - 2016
• ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အဲလက်စ်အောက်မေ့ဖွယ်ဆု
• Indore Nagar Nigam မှအထူးပညာရေးအမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးဆရာအဖြစ်ဂုဏ်ပြုသည်
•နားမကြားသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအားလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက် Indore ယာဉ်အသွားအလာရဲမှဂုဏ်ပြုခဲ့သည်
မွေးနေ့ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၆ (စနေနေ့)
မွေးရပ်မြေ Indore, Madhya Pradesh ပြည်နယ်
ဇာတိမြို့ Indore, Madhya Pradesh ပြည်နယ်
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် Indore လူမှုရေးလုပ်ငန်းကျောင်း
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း [နှစ်ခု] အိန္ဒိယအမျိုးသမီး ၁၀၀ • B.Sc. ဘူမိဗေဒ၌
• B.Ed. နားမကြားသောပညာရေး
• Indore လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုကျောင်းမှလူမှုရေးဆိုင်ရာအလုပ်များ
• M.Ed. ဆရာများနှင့်အထူးပညာရေးအတွက်
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် မေလ ၁၈ ရက် ၂၀၀၁
ခင်ပွန်း / ဇနီး Gyanendra purohit
ကလေးများ သား (များ) - Sarthak Purohit၊ Chinmay Purohit
မိဘများ ဖခင် - PD Sharma (အိန္ဒိယပြည်နယ်ဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာ Indore)
အမေ - Pushpa Sharma သည် (Anand Service Society တွင်အလုပ်လုပ်သည်)
Monica Purohit နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Monica Purohit သည် Indore အခြေစိုက်လူမှုရေးလုပ်သား၊ အထူးပညာရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်နိုင်ငံတွင်းရှိချို့ယွင်းသူများအတွက်အလုပ်လုပ်နေသော Anand Service Society ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။
မော်နီကာသည် ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိသူမရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားအလုပ်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သည်။
Indore လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်၌လေ့လာစဉ် Monica သည် Gyanendra နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုမောင်နှံသည်ထိုအချိန်ကတည်းကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။
Indore လူမှုရေးကျောင်းမှ Monica နှင့် Gyanendra Purohit
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်မော်နီကာနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း၊ Gyanendra purohit ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးသွားသောသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူအန်းနန်၏မှတ်ဉာဏ်တွင်နားမကြားသူများအတွက်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Anand Service Society ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Gyanendra Purohit ၏အစ်ကိုနှင့်အတူကလေးဘဝပုံ
Anand Service Society သည်ပညာရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အကူအညီလိုအပ်နေသောချို့ယွင်းသူများ (အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများ) ကိုကူညီသည်။ ဤအဖွဲ့သည်အဓိကအားဖြင့် Indore နှင့်လူမျိုးစုနှင့်ကျေးလက်ဒေသများဖြစ်သော Madhya Pradesh ဒေသမှ Dhar နှင့် Alirajpur (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏စာမတတ်မြောက်ဆုံးဒေသ) ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
Anand ဝန်ဆောင်မှုအသင်း၏ Logo
အဖွဲ့အစည်းမှတဆင့်မော်နီကာနှင့်သူမ၏ထောက်ခံသူခင်ပွန်း Gyanendra Purohit တို့သည်ချို့တဲ့သူများစွာ၏ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကနားမကြားသောကလေးငယ်များကိုပုံမှန်ကျောင်းများသို့သွားရန်၊ ပြည်နယ်အစိုးရမှဆရာမအားနားမကြားစေရန်ကြိုတင်မှာကြားထားချက်၊ အစိုးရအိုင်တီအိုင်ကောလိပ်ရှိနားမကြားသူများအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ပမာဏနှင့် ၄ င်းတို့တွင် ၀ င်ခွင့်ရရန်အစိုးရမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ နောက်ထပ်။
မော်နီကာသည် M.P Deaf & Dumb Police Helpline ၏ပြည်နယ်အဆင့်အမျိုးသမီးညှိနှိုင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်သည်။ အင်ဒီရဲရဲအား Anand Service Society နှင့် တွဲ၍ ဆက်သွယ်သည်။
သူမသည်အင်ဒူးရှိ Dewas ရှိ NGO Mahesh Drishtiheen Kalyan Sangh ဆရာလေ့ကျင့်ရေးယူနစ်နှင့် Tata International Ltd. (ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီ) တွင်လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ်မစတင်ခင်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အလားတူပြissuesနာများနှင့်ပြproblemsနာများမျှဝေသောနားမကြားသောအရွယ်ရောက်သူများ၏ပုံမှန်ကလေးများအတွက် Monica သည် CODA ကလပ်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်မော်နီကာနှင့် Gyanendra purohit လက်ဟန်ပြဘာသာစကားအတွက်နိုင်ငံတော်သီချင်းရေးစပ်။ မော်နီကာနှင့်ဂျင်းနန်ဒရာတို့သည်နိုင်ငံတော်သီချင်းအားလက်ဟန်ပြဘာသာစကားဖြင့်ပထမဆုံးရေးသားခဲ့ကြရာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မှအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် Atal bihari vajpayee ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်မော်နီကာနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သည့်ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင် Sholey (1975), Gandhi (1982), Munna Bhai M.B.B.S. လက်ဟန်ပြဘာသာစကားဖြင့် (2003) နှင့် Taare Zameen Par (2007) ။
မော်နီကာနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Tukoganj ရဲစခန်းရဲ့ရဲရင့်သောရဲစခန်းကိုနားမကြားသူများနှင့်စကားပြောရန်အစပြုခဲ့သည်။
2015 ခုနှစ်တွင်မော်နီကာနှင့် Gyanendra '' Aaj Ki Raat Hai Zindagi '' ၏ဘီဘီစီထုတ်လုပ်မှုအတွက်သရုပ်ဆောင်လုပ် Amitabh Bachchan နှင့် Star Plus အားအပေါ်ထုတ်လွှင့။
Aaj Ki Raat Hai Zindagi မှ Gyanendra နှင့် Monica Purohit
2017 ခုနှစ်တွင် Monica နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းဒေါက်တာ Subhash Chandra ကတည်ခင်းZည် Zee ဖျော်ဖြေရေးရဲ့ '' DSC Show ကို, 'တွင်ပြပွဲအပေါ်မြင်ခဲ့ကြသည်။
Monica နှင့် Anand ၀ န်ဆောင်မှုအသင်းမှသူမ၏ခင်ပွန်းသည်နိူင်ငံခြားရောဂါကူးစက်မှုကိုပိတ်ဆို့နေစဉ်အတွင်းလက်ဟန်ပြဘာသာစကားဖြင့် (တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသော) ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု helpline မှတစ်ဆင့်နားမကြားသူ ၅၀၀ ကျော်တို့၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
Monica နှင့် Gyanendra တို့သည် Narmada Jhabua Gramin Bank ၀ န်ထမ်းများအားလက်ဟန်ပြဘာသာစကားများကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဘဏ်သည်အိန္ဒိယ၏ပထမဆုံးနားမကြားသောရင်းနှီးသောဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2018 ခုနှစ်တွင် Madhya Pradesh ပြည်နယ်မှ Satna ပြည်နယ်မှပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူဆွံ့အနားမကြား Sudeep Shukla အား Monica နှင့် Gyanendra တို့ကကူညီခဲ့သည်။ သူတို့ကသူ့ကိုသူ့ရွေးကောက်ပွဲမိန့်ခွန်းပေးကူညီပေးခဲ့သည်။ Sudeep သည်အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံးနားမကြားသော MLA ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မော်နီကာနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းတို့ကစီစဉ်ကျင်းပသည့်ပြပွဲ၏ Kaun Banega Crorepati တွင် Karamveer Special တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည် Amitabh Bachchan ။
Kaun Banega Crorepati ရှိ Gyanendra နှင့် Monica Purohit
↑၁ iWGA - Monica Purohit ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
↑နှစ် အိန္ဒိယအမျိုးသမီး ၁၀၀
Hindi အတွက် zaheer khan အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ထီ kapil sharma အစစ်အမှန်နာမကိုအမှီပြသပါ
akshay kumar ဖခင်နှင့်မိခင်
rakul preet Singh ၏အသက်အရွယ်
Pranab Mukherjee ၏အမည်အပြည့်အစုံ
သေခြင်းတရားမှာ Swami Vivekananda အသက်အရွယ်